Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0613 lah
Fetsy kokoa ilay menarana
Alahady 03 Feb.
Vakio ny Gen. 3:1. Ahoana ny filazalazana momba an'i Satana, naka ny endriky ny menarana? Voaseho, na dia ao amin'io andininy iray io fotsiny aza, ny fahamarinan'izany filazalazana izany. Amin'ny fomba ahoana?
Hita eo amin'ny fomba nampidirany ny fakam-panahy nafitsony ny hafetsen'ilay menarana. Tsy famelezana mivantana no nataony, fa niezaka ny nampiresaka an-dravehivavy izy. Mariho fa misy lafiny miteraka fisalasalana, anankiroa fara fahakeliny, ao anatin'ny tenin'ilay menarana. Nanontaniany voalohany indrindra raha toa ka tena nanao fanambarana manokana tokoa Andriamanitra. Sady niaraka tamin'izay koa, ny fomba nametrahany ny fanontaniany dia nataony mba hiteraka fisalasalana mikasika ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra. Ny tena marina dia izao no fanontaniana napetrany: "Tena nosakanan'Andriamanitra tsy hisy ho anareo tokoa ve ny zavatra rehetra? Tsy nomeny alalana hihinana amin'ny hazo rehetra ao amin'ny saha ve ianareo?' Nataony fanahy iniana mihitsy ny nandiso ny toro marika nomen'Andriamanitra mba handrisihana an-dravehivavy hanitsy ny fanambarany ka ho voataonany amim-pahombiazana hiresaka ravehivavy. Marina tokoa fa tena "feno hafetsena' ny paik'adin'ilay menarana.
Mazava ho azy fa tsy misy tokony hahagaga izany rehetra izany. Nantsoin'i Jesôsy hoe mpandainga sy rain'ny lainga ny devoly (Jao. 8:44). Mamitaka izao tontolo izao ny devoly ao amin'ny Apôk. 12:9; midika izany fa tsy misy amintsika, na dia isika Kristianina advantista mitandrina ny andro fahafito aza, afa-doza amin'izany. Miharihary fa tsy misy very tsy akory ny hafetsen'i Satana na ny toetrany mamitaka. Mbola mampiasa foana ny paik'ady izay nahombiazany tamin'i Eva izy. Ametrahany fanontaniana ny Tenin'Andriamanitra sy ny fikasany, ka antenainy hiteraka fisalasalana sy hitaona antsika "hiresaka' izany. Tsy maintsy miambina isika (1 Pet. 5:8) mba hanoherantsika ny teti-dratsiny.
Ampitahao ny Mat. 4:3-10 sy ny Gen. 3:1. Inona no tetik'ady mitovy amin'izany nampiharin'i Satana tamin'i Jesôsy, ary nahoana no tsy nahomby izany? Inona ireo lesona azontsika ianarana avy amin'ny fomba namalian'i Jesôsy ny famelezan'ny devoly tany an'efitra? Miezaka ny hampihatra ny zavatra toy izany amintsika i Satana ankehitriny. Amin'ny fomba ahoana?